Mogadishu Journal » 2018 » August » 30
Isku aadka wareega Group-yada Koobka UEFA Champions League oo la sameeyay
Mjournal :-Isku Aadka Tartanka Horyaalka Yurub Champions League 2018/2019 ayaa goor dhow la sameeyay iyadoo ay kooxo adag ay isku aadeen. Gurubyada ugu adadag ayaa waxaa ka mid ah guruubka H oo ay ku wada jiraan Valencia, Manchester United, Juventus iyo Young Boys. Sidoo kale...
Al-shabaab oo sheegtay weerar xalay ka dhacay Shabeellaha dhexe
Mjournal :-Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay weerar xalay lagu qaaday saldhig ay ciidamada dowlada ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Sh/dhexe. Mid kamid ah warbaahinada taageera Al-Shabaab oo soo xiganaysay Sarkaal katirsan Al-Shabaab ayaa daabacay in ciidamadoodu ay...
Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada degmada Marka
Mjournal :-Waxaa maanta xaalad deganaansho ah laga dareemayaa magaalada Maro ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii xalay fiidkii uu ka dhacay dagaal khasaare kala duwan geystay. Ururka Al Shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay magaalada Maro ka weerareen dhanka Jillib-maro oo...
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Shiinaha
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa saakay gaaray magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin Wasiiro iyo...
Liverpool oo Labadan weeraryahan midkood ka diraysa Anfield
Kooxda kubadda cagta Liverpool wali sii wada sidii ay kooxda kaga diri lahayd xodigaha aysan u baahneen ee kusugan Anfeild Stadium. Marakanna weeraryahanada Divock Origi iyo Domanic Solanke ayaa midkood laga diri doonaa Reds kuwaas oo ay kooxdu u aragto kuwa aan u qalmin in ay...
Maxkamad xukuntay nin dilay Haweeney Soomaaliyeed
Mjournal :-Maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa xukun ku riday nin Masaari ah oo 2016-kii dilay Haweeney Soomaaliyeed oo qaxooti ku aheyd wadankaasi, taasi oo lagu magacaabi jiray Xamda Maxamuud Xasan, heysatana tiro caruur ah. Gacan ku dhiiglaha dilka geystay...
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho
Mjournal :-Waxaa goordhow soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, oo muddo sanad ka badan ka maqnaa dalka Soomaaliya. Safarka Xasan Sheikh Maxamuud, wuxuu yimid saacado kadib markii madaxweynaha ka fuuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu...
Boob lagula kacay goobo ganacsi oo ay leeyihiin Soomaali (SAWIRRO)
Mjournal :-Ganacsato Soomaaliyeed oo goobo ganacsi ku lahaa degaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika ayaa boob lagula kacay ganacsigooda, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Dukaamada la boobay ee ku dhexyaala xaafada Soweto ayaa waxa leh dad shisheeye...